संसदमा कड्किए संचार मन्त्री : कम्युनिष्ट प्रतिबन्ध लगाउने कांग्रेसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा सुहाउँछ ? - Sagarmatha TV
संसदमा कड्किए संचार मन्त्री : कम्युनिष्ट प्रतिबन्ध लगाउने कांग्रेसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा सुहाउँछ ?
काडमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नसुहाउने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला आफ्नो इतिहास सम्झन कांग्रेसलाई सुझाव दिए।
‘कुनै समय कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाएको कांग्रेसले स्वतन्त्रताको मसिया धेरै बन्नु पर्दैन,’ संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटँले भने, ‘मैले बारम्बार भन्ने गर्या छु। कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेले पनि यो कुरा उठाउनु आवश्यक छैन। १५ सालमा विपी कोइरालाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा मणिराज उपाध्यायाको पत्रिकालाई आलोचना गरे वापत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिईएको थिएन। यो मैले भनेको होइन। भीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेको हो।’
उनले अरु मुद्धा नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई ‘परालको त्यान्त्रो समातेर पार लाग्न सक्छ कि’ भनेर प्रयोग गरिएको दाबी गरे।
‘लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै कुरै छैन। यो चाहीँ अरु मुद्धा सकिएपछि परालको त्यान्द्रो समातेर पार लागिन्छ कि भनेर नभन्ठान्नुस्। हुँदै नभएका कुरालाई उठाएर हैरान बनाउने, डिमोरलाईज्ड गर्ने हिसाबले कुरा उठाउनु, अर्काको राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो होइन,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘यो सत्य हो नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस छन्। अहिले दुई तिहाईकै सरकार छ र यो व्यवहारमा जाँचिने छ। को लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षधर? को कुरा मात्रै गर्ने ?’
मन्त्री बास्कोटाले २०५८ सालपछि संकटकालका मिडाको अवस्था सम्झाउँदै त्यस्तो संकटकाल लगाउने कांगेरसले स्वतन्त्रताको प्रश्न उ७उन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे।
‘अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले त्यतिवेला नेपाललाई के भनेका थिए? पत्रकारका लागि सबै भन्दा ठूलो कारागार भन्दा कसको सरकार थियो?,’ कांग्रेस सभापति देउवा तर्फ लक्षित गर्दै बास्कोटाले प्रश्न थपे, ‘लोकतन्त्र कल्ले किस्तिमा राखेर बुझाएको थियो? प्रेस स्वतन्त्रताको शिकारीहरुको सुचीमा को परेको थियो? मैले लगाएको आरोप होइन? आईएफजेले लगाएको आरोप उल्लेख गरेको हो।’ उनले विधेयकका नभएका कुरा प्रचार नगर्न कांग्रेसलाई चेतावनी दिए। पत्रकार महासंघसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध आवाज उठाउने सबैलाई उनले कांग्रेसकै डालोमा हाल्ले प्रयार गरे।
‘हामीलाई त कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारीहरु भनेर उपमा दिएको छैन र हामीले त्यो भोग्न पनि नपरोस्। हामी त्यसतर्फ सचेत छौ,’ बास्कोटाले भने, ‘सरकारले विधेयक नै ल्याउन नहुने थियो भने यसभन्दा अगाडि के ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो? के गरि सरकार चलाउने गर्नुहुन्थ्यो ? कानुन विना ?’
गुँठीमा समान्तवाद मात्र हैन साम्यवाद र पुँजीवाद छ
उनले गुठीयारहरुलाई आफुले सामन्त नभनेको दावी गर्दै त्यहाँभित्र सामन्तवाद र मात्र नभएर साम्राज्यवाद र पुँजीवाद पनि रहेको बताए।
‘जनतालाई सामन्ती भनेको होइन। पूँजीवाद पनि छ सामराज्यवाद पनि छ। सामन्ती सोचहरु पनि छन्। यो चाँही साँचो हो,’ मन्त्री बास्कोटाले भने।